स्वास्थ्यको लागि यस कारण खानुहाेस् आँप ? - Malayakhabar
होम पेज फिचर स्वास्थ्यको लागि यस कारण खानुहाेस् आँप ?
स्वास्थ्यको लागि यस कारण खानुहाेस् आँप ?
आँप तपाई हामी धेरैलाई मन पर्ने फल हुनसक्छ । गर्मी महिनाको आगमनसँगै बजारमा आँप पनि देखिन थालेका छन् । तर, अहिले आएका आँप भने औषधी प्रयोग गरेको पकाइएका हुनाले ती आँपको प्रयोगले फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा गर्छ ।
स्वस्थ आँपको प्रयोगले मानव शरिरलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । आँपले स्वास्थ्यमा गर्ने फाईदाबारे गरिएको एक अनुसन्धानले आँपले गर्ने विभिन्न फाइदाहरू पत्ता लगाएको छ । आँपले मानिसको आँखाको ज्योती नष्ट हुन नदिने, क्यान्सरबाट बचाउने जस्ता अन्य विभिन्न फाइदाहरूका बारेमा विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
के-के छन् त आँप खानुका फाईदा?
अघिल्लो लेख यस्ता छन् चिप्ले भिन्डी खानुका फाइदाहरु!
पछिल्लो लेख युरोकप फुटबल जुन ११ तारिखबाट इटालीको रोममा शुरु हुँदै।